नेपाली बजारमा आज अमेरिकी डलरको भाउ कति ? हेर्नुहोस् कुन देशको कति छ ?
२९ जेठ २०७६ काठमाडौँ : आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ ८१ पेसा रहेको छ भने बिक्रिदर १ सय ११ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ।
यसैगरी युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४० रुपैयाँ ७२ पैसा छ भने बिक्रिदर १ सय ४१ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ४३ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ।
युएई दिराम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ भने मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ६२ पैसा छ भने बिक्रिदर २६ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ। दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ९ रुपैयाँ ४३ सा रहेको छ।
त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ६४ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ३ सय ६६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर २ सय ९५ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर २ सय ९५ रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ।
एसिसी यु–१९ इस्टर्न रिजन च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक